Wararka Maanta: Khamiis, Sept 2 , 2021-Madaxweynaha Somaliland oo isku shaandhayn ku sameeyay xukuumadiisa
Wasiirada xilka waayay ayaa kala ah, wasiirkii diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, wasiirkii beeraha Axmed Muunin Seed, wasiirkii biyaha Maxammed Muuse Diiriye, wasiirkii ciyaaraha Boos Mirre Maxammed iyo Jaamac Maxamuud Cigaal wasiirki macdanta iyo tamarta.
Wasiirku xigeenada iyo saraakiisha kale ee xilka laga qaaday ayaa kala ah, Cabdinaasir Cumar Jaamac wasiir ku xigeenkii warfaafinta, Cabdiqaadir Cumar Jaamac wasiir ku xigeenkii qorshaynta, Yuusuf Maxammed Guuleed wakiil Somaliland ee Itoobiya, Farxaan Aadan Haybe guddoomiyihi hay'ada shaqaalah, Cali Ibraahin Jaamac guddoomiyihii baanka dhexe.
Ciise Kayd Maxamuud ayaa loo magacabay jagada wasiirka arrimaha dibada oo mudo bilo ah banaanayd, Maxammed Xaaji Cismaan Jaamac ayaa loo magacaabay wasiirka beeraha, Cali Xasan Maxammed Jaamac ayaa loo magacaabay wasiirka biyaha, Cabdillaahi Faarax Cabdi ayaa loo magacaabay wasiirka tamarta, Sh. Cabdirisaaq Xuseen Cali ayaa loo magacaabay wasiirka diinta iyo awqaafta, Cabdirisaaq Xaaji Ducaale qanbi ayaa loo magacaabay wasiirka ciyaaraha.
Wasiirku xigeenka qorshaynta ayaa loo magacaabay Axmed Xasan Nuur, wasiir ku xigeenka warfaafinta ayaa loo magacaabay Cabdiraxman Cali Cabdi Cali, wakiilka Itoobiya ayaa loo magacaabay Maxammed Axmed Maxamuud, guddoomiyaha baanka dhexe ayaa loo magacaabay, Cali Cabdillaahi Daahir, guddoomiyaha hay'ada shaqaalaha ayaa loo magacaabay Khaalid Jaamac Axmed.